Thwebula CuteDJ 4.3.4 – Vessoft
CuteDJ – a software ukudala umculo and remixes of izinhlobo ezahlukene. CuteDJ kuvula amathuba ebanzi Wabasaqalayo futhi DJs professional owakhelwa iqoqo imiphumela ezidingekayo futhi amathuluzi luyatholakala. Isofthiwe ikuvumela ukuba basebenze ngayo ezilalelwayo nezibukelwayo amafayela ngetakhiwo letehlukene, sihlanganise wabayisa isiqophi Ukugunda kanye bashise akwazi. CuteDJ isekela uxhumano kuze 8 hardware isilawuli enikezela eliphelele lokulawula umculo mix ngaphandle usebenzisa i-computer. CuteDJ uphelele ukusetshenziswa eziteshini zomsakazo, amaqembu nokuzilibazisa ezindaweni ezahlukene.
Amathuba Wide ukudala umculo
Usekela inqwaba abezindaba takhiwo
Zomculo Abaningi nemiphumela
The enamandla mix engine
Usekela hardware abalawuli
Amazwana on CuteDJ:
CuteDJ Ahlobene software:
Українська, Français, Español, Deutsch... Vegas Pro 13.0.453
English, Українська, Français, Español... Virtual DJ 8.2.3523 futhi 7.4.7
Umhleli Audio Ithuluzi professional ukudala uhlanganise amafayela alalelwayo. Isofthiwe lisikisela amathuba ebanzi for DJs abanolwazi nabaculi.
English, Français, Español, Deutsch... Reaper 5.311
Umhleli Audio Umhleli enamandla amafayela alalelwayo amafomethi ezahlukene. Isofthiwe iqukethe inqwaba amathuluzi ukulungisa amathrekhi umsindo ukudlala ithele amafayela.
Umhleli Audio Isofthiwe encode futhi ukunquma amafayela video. Isofthiwe isebenzisa eziphambili ifayela zlib algorithm enikeze esiphezulu izinga image.
English, Français, Español, Deutsch... Speedfan 4.51
Testing Isofthiwe ukuqapha isimo computer. Futhi isofthiwe iqukethe amathuluzi ukulawula kanye ulungise kwemigomo izingxenye computer.
Antiviruses Enamandla war isithwebuli ukuthola ususe amagciwane. Isofthiwe olusha njalo ukuqinisekisa isimo samanje unqulo wesi arab yolwazi.
English, Afrikaans, Українська, Français... UltraSurf 16.03